Sidee loo adeegsadaa qalabka Amazon si loo yareeyo ganacsigaaga?
Si aad u guulaysato ganacsigaaga Amazon oo aad waqti u hesho horumarka ganacsigaaga, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qalabka waxtar leh ee Amazon FBA iibiyeyaasha. Qalabyadani waxay noloshaadu u sahlanaaneysaa, inaad ku badbaadiso wakhtiga aad ku qaadato baaritaanada suuqa iyo falanqaynta.
Haddii aad ku jirto qaabka ugu hooseeya ee dhaqdhaqaaqaaga Amazon, waxaan kugula talineynaa inaad la xarbiso asaasiga ah si aad u ilaaliso qarashaadkaaga. Muddo ka dib, marka ganacsigaaga uu noqdo mid faa'iido leh, waxaad bilaabi kartaa inaad ku darto qalabka cusub si kor loogu qaado wax soo saarka ganacsigaaga.
Inaad ganacsigaaga ka bilowdo Amazon uma baahnid maalgelin muhiim ah. Hase yeeshee, waa inaad ka fekertaa guushaada mustaqbalka. Waa inaad fahamtaa in ganacsiga laga furo Amazon uu ka fudud yahay horumarka. Waqtiga qaarkood, waxaad u baahan doontaa inaad sare u qaaddo heerka macaamiishaada ilaa heerka xiga. Haddii kale, waxaad waayi doontaa macaamiisheena mustaqbalka iyo faa'iidada.
Taasi waa sababta qodobkan aan ka wada hadli doonnaa qalabka ugu fiican ee Amazon ee aad isticmaali karto si aad u horumariso ganacsigaaga FBA.
Qalabka la baaray ee Amazon
Waa qalab qiimo jaban oo qiimeeya Amazon oo ka caawiya inuu soo qaado JS ayaa ka tagay oo raadsaday xogta taariikhiga ah. Waxay kormeertaa badeecooyin badan oo Amazon ah waxayna kuu sheegeysaa marka qiimaha hoos u dhaco. Xogta ay bixiso qalabka geelu waxay kaa caawineysaa inaad sii wado tartan suuqa kuugu jirta oo aad ka mid tahay TOP ee ciyaarta e-commerce. Waxaa intaa dheer, waxay ka caawineysaa in la go'aamiyo sharciyeynta xogta iibka. Waxaad la socon kartaa in alaabadu ay bilaabayaan oo iibinayaan ama si joogto ah u shaqeynayaan. Isticmaalka qalabka rinjiga, waxaad ogaan kartaa isbeddel waqti ka dib. Nasiib darro, qalabkani ma laha wax kale oo shaqeynaya.
. Isticmaalidda qalabkan, waxaad ka baaraandegi kartaa alaabta, liistada iyo maamulida. Intaa waxaa dheer, waxaad la socon kartaa dhammaan kharashyadaada oo aad xisaabiso faa'idada saafiga ah. Waxay siisaa fursad ay ku daabacaan astaanta shakhsi ahaan marka ay ku jiraan walax kasta oo ku daraya liiska. Waxaad helaysaa faa'iido xoog leh markaad nadiifinta dakhliga faa'idada leh ee ganacsigaaga adoo isticmaalaya qalab mobile.
Faa'iido kale oo ka mid ah qalabkan waa in aad la socon karto faa'idada ganacsiga ee SKU kasta oo aad ku ciido Amazon.
Shaybaarka Sheybaarka wuxuu bixiyaa 30 maalmood oo tijaabo ah. Kadib, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso $ 49 bil kasta. Si aad u korto dufankaaga ganacsiga, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid ereyada muhiimka ah ee aad ujirtid, iyo waxa aad u baahan tahay si aad u hagaajiso xoojinta iibinta. Barnaamijka AMZ Tracker wuxuu ku siin doonaa dhammaan xogtan, kaa caawinaya inaad go'aan ka gaartid waxa aad ka qabanaysid ganacsigaaga. Intaa waxaa dheer, adoo isticmaalaya qalabkani, waxaad la socon kartaa badeecada tartameedka si aad u aragto marka ay sameeyaan isbeddel oo shaqaynaya. AMZ Tracker waxay kuu sahleysaa inaad qeexdo waxa keenaya sicir-celintaada oo hoos u dhigaya oo waqtigana ku hagaajinayso. Intaa waxaa dheer, waxaad la socon kartaa dib-u-eegisyo xun oo soo saarka waxsoosaarka naadiga. La soco in qalabkani leeyahay kharash bille ah mana bixinayo adeegyo bilaash ah Source .